အကြမ်း၊ အချော နှစ်မျိုးသုံး လူကြိုက်များလွန်းနေသည့် Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero SUV မော်ဒယ်လ်သည် လူကြိုက်များရေပန်းအစားဆုံးမော်ဒယ်လ် Third Generation ဖြစ်သည့် ၁၉၉၉-၂၀၀၆ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပြီး အကြမ်း၊ အချော နှစ်မျိုးစလုံးသုံးကာ SUV ကားထဲတွင် လူကြိုက်များရေပန်းစားသည့် ကားဖြစ်သည်။ 2-Door နှင့် 4-Door နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ထားပြီး 4-Door မှာ လူကြိုက်များရေပန်းစားသကဲ့သို့ အဝယ်များသည်ကို တွေ့ရသည်။ Grade များမှာ Exceed? Super Exceed? Long Exceed? 20th Anniversary Premium Package? HDD Navi Edition? Active Field Edition စသည့် Grade များ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အင်ဂျင်ကိုလည်း သုံးစွဲသူအကြိုက် ဒီဇယ်နှင့် ဓာတ်ဆီနှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားသည်။
နှစ်သက်ဖွယ်ရာဒီဇိုင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် Volvo ၏ XC40
Safety features များစုံလင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်း၊ လူတိုင်းနှစ်သက်ဖွယ်ရာ ဒီဇိုင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသည့် Volvo ၏ အရည်အသွေးမြင့် XC40 နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ပုံမှန်အောက်ကျဆင်းသည့် ကားဈေးကွက်
အချိန်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲနီးလာခြင်း၊ ဝန်ထမ်းကားပါမစ် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်များကြောင့် CBU ကားများ၏ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုမှာ ပုံမှန်ထက် လျော့ကျနေကြောင်း ကားဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရသည်။
ကျပ်သိန်း ၁၅၀ ၀န်းကျင်ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သည့် Mazda Verisa နှင့် Mitsubishi Mirage
ဂျပန်ညာမောင်း ၁၃၀ဝ စီစီကားများထဲမှ ပေးလိုက်ရသည့်ဈေးနှင့် ထိုက်တန်သည့်အရည်အသွေးတစ်ခုကို ပြန်ရရှိနိုင်မည့်အပြင် ကျပ်သိန်း ၁၅၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် Mazda Verisa နှင့် Mitsubishi Mirage တို့ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကားတင်သွင်းခွင့် မူဝါဒများကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်အတွင်း တပ်နှင့်နီးစပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သင်္ဘောသားကဲ့သို့ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူများကို ကားတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်စနစ်ဖြင့် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
ပွင့်လင်းရာသီ စရောက်လာတာနဲ့ ခရီးတွေသွားတဲ့သူတွေက များလို့နေပါတယ်။ များလားမများလား ရန်ကုန်မြို့မှာ လမ်းတွေရှင်းနေတာက သက်သေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ဆောင်သွားသင့်လဲ၊ ဘာတွေကို ရှောင်ရှားရမလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ နေထိုင်လုပ်ဆောင်သင့်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကားတာယာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး နည်းလမ်းများ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ပြည်ပ Car Brand နဲ့ Logo တွေအကြောင်းချည်းပဲ ဖတ်နေရလို့ ငြီးငွေ့မသွားအောင် အပြောင်းအလဲလေးအနေနဲ့ ကားတစ်စီးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ တာယာတွေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းကတော့ ကား Brand Name တွေအစား မိုးရာသီမှာ ကားမောင်းရင် အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Brand Name တွေအကြောင်းပဲ ဖတ်နေရလို့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး ငြီးငွေ့နေမှာစိုးလို့ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Motoring ပရိသတ်ကြီးအတွက် A မှ Z အထိကား Brand Name တွေရဲ့ အဆက်ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဩစတြေးလျမှာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကား Brand Name တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ ယာဉ်မောင်းတဲ့အခါ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ . . .
နိုင်ငံအလိုက် ကား Car Brand Names နဲ့ Logo တွေအကြောင်းပဲ ဖတ်နေရလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး ပြင်းနေမှာစိုးလို့ ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ မိုးရာသီမှာ ယာဉ်မောင်းတွေ ဂရုစိုက်သင့်တာလေးတွေကို ပြောင်းလဲတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ မုတ်သုံရာသီဥတုက သိတဲ့အတိုင်း မိုးများတဲ့ ဩဂုတ်လထဲဆိုတော့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် ရေကြီးရေလျှံတာတွေကလည်း နေရာအများစုမှာ ဖြစ်ပွားလို့နေပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆိုလည်း ရွာတဲ့ မိုးရေချိန်ကများတော့ ခဏရွာတာနဲ့ လမ်းတွေပေါ် ရေတွေပြည့်ပြီး ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကို ငယ်ထိပ်ထိမြင့်တက်စေပါတယ်။ မိုးကြီး၊ လေပြင်းလို့ ဟိုနေရာမှာ သစ်ပင်လဲလို့၊ အုတ်တံတိုင်းပြိုကျလို့ဆို တဲ့အသံတွေကလည်း ခပ်စိပ်စိပ်ကြားလာရတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးရာသီကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်သိရှိရှောင်ရှားနိုင်စေဖို့ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Motoring ကဏ္ဍအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအဖြစ် သူဟာကားထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံဘေးနားမှာ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးကိုပါ တွဲဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက Lamborghini ကို ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့သလို ကိုယ်ပိုင်ပုံစံ ဒီဇိုင်းနဲ့ကားတွေ ထွက်ရှိလာခဲ့စေပါတယ်။